स्वास्थ्य र औषधि | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: स्वास्थ्य र औषधि
तपाइँको चयापचय को गति कसरी गर्ने?
प्रकाशित 04.10.2021 04.10.2021
प्रायजसो, अतिरिक्त वजन हाम्रो शरीर मा चयापचय को गुणवत्ता मा सीधा निर्भर गर्दछ। त्यहाँ मानिसहरु छन् जो उनीहरु जे चाहन्छन् खान सक्छन्, कुनै पनि मात्रा मा र सबै भन्दा राम्रो छैन जब अरु ...
ब्राजिलियन आहार - सजीलै तौल घटाउनुहोस्
प्रकाशित 29.09.2021 29.09.2021
लोकप्रिय आहार मध्ये एक, ब्राजीलियन, पछ्याउन को लागी धेरै सजिलो छ र एक राम्रो slimming प्रभाव छ।
पानी आहार - तनाव बिना5किलो घटाउनुहोस्
तपाइँ चाँडै तौल घटाउन सक्नुहुन्छ र खाना मा धेरै धेरै आफैलाई सीमित गर्न सक्नुहुन्न। मुख्य कुरा केहि नियमहरु अनुसार पानी पिउनु हो।
क्रम मा सजीलो र अधिक कुशलता संग वजन कम गर्न को लागी, तपाइँ शरीर मा शारीरिक प्रक्रियाहरु लाई बुझ्न को लागी आवश्यक छ। त्यसपछि, वजन गुमाउन सजिलो र अधिक प्रभावकारी हुनेछ!
तौल घटाउन खोज्नेहरु को लागी एक राम्रो, प्रभावकारी आहार। एक विविध आहार तपाइँ भोक संग पागल जान दिनुहुन्न। तर आहार सख्त छ!
के तपाइँ सूप मन पराउनुहुन्छ र वजन कम गर्न चाहानुहुन्छ? यहाँ सरल तर स्वादिष्ट बोसो जलाउने सूप को लागी केहि व्यञ्जनहरु छन्!
के तपाइँ तौल घटाउन चाहानुहुन्छ? थाहा छैन कुन आहार छनौट गर्ने? र कसरी स्थायी वजन गुमाउने को प्रभाव बनाउन? हामी तपाइँलाई देखाउनेछौं!
राम्रो कम्पनी, चिसो बियर र नुहाउने भन्दा बढी रमाईलो के हुन सक्छ? तर के तपाइँ यसलाई त्यहाँ पिउन सक्नुहुन्छ, वा कुन मात्रा मा यो अनुमति छ?
यौन संचारित रोगहरु को रोकथाम र सुरक्षा
प्रकाशित 18.09.2021 19.09.2021
सजीलो उपचार गर्न को लागी रोक्न को लागी - यौन संचारित रोगहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो उपचार। यस बारेमा कुरा गरौं।
शक्ति बढाउने परम्परागत विधिहरु
प्रकाशित 18.09.2021 18.09.2021
तनाव को कारण, गरीब पारिस्थितिकी, कुपोषण - धेरै पुरुषहरु शक्ति मा गिरावट बाट ग्रस्त छन्। यो fixable छ, र रसायन बिना, तर राम्रो पुरानो जडी बूटी संग।
रोकथाम र prostatitis को उपचार
दुर्भाग्यवश, अब धेरै भन्दा धेरै पुरुषहरु prostatitis बाट पीडित छन्, जो भलाई, तनाव र परिवार मा एक घोटाला मा एक सामान्य गिरावट को लागी नेतृत्व गर्दछ। आउनुहोस् संक्षेप मा बुझौं के कारणहरु, कारणहरु, रोकथाम र prostatitis को उपचार।
अग्नाशयी रोग को लागी घर आहार
प्रकाशित 11.08.2021 11.08.2021
औषधि संग उपचार पछि, यो निम्न आहार को लायक छ, ती प्यानक्रियाटिक रोगहरु को रोकथाम को लागी पनि उपयोगी छन्।
प्रकाशित 08.08.2021 08.08.2021
दाँतको दुखाइ हो कि बिहान देखि रात सम्म सताउँछ, दन्त चिकित्सक मा जाने को डर। सबैले यो सामना गरेका छन् - pulpitis, यो के हो? यो कसरी उपचार गरिन्छ? यसलाई सँगै बाहिर आंकलन गरौं!
के तपाइँ आन्द्राहरु र सम्बन्धित समस्याहरु को बारे मा जान्न आवश्यक छ
यो केहि छैन कि यो शरीर को दोस्रो मस्तिष्क भनिन्छ को लागी हैन, आंतों मात्र हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य, तर हाम्रो भावनात्मक पनि प्रभावित गर्दछ ... र धेरै धेरै! न केवल प्रभावित गर्दछ
सौन्दर्य र स्वास्थ्य को लागी विदेशी अनाज
प्रकाशित 05.08.2021 05.08.2021
सबैलाई थाहा छ एक प्रकार का अनाज र हामीलाई थाहा अन्य अनाज को लाभ, तर कसरी विदेशी अनाज हाम्रो स्वास्थ्य र सौन्दर्य को लागी उपयोगी हुन सक्छ बाहिर आंकडा गरौं!
स्लिमिंग अदरक चिया
प्रकाशित 02.08.2021 02.08.2021
आज हामी तपाइँलाई बताउनेछौं कि तपाइँ कसरी आफ्नो स्वास्थ्य मा सुधार र भारी प्रयास र भोक हडताल बिना वजन कम गर्न सक्नुहुन्छ।
क्षमता बढाउने उत्पादनहरु
प्रत्येक मानिस को लागी, उसको शक्ति धेरै महत्त्वपूर्ण छ, यो न केवल एक तरीका हो आनन्द प्राप्त गर्ने हो, तर अहंकार को एक हिस्सा हो। एक वास्तविक मानिस मात्र एक वा दुई पटक र नियमित रूपमा गर्न सक्दैन। आउनुहोस् कसरी पुरुषहरु को लागी शक्ति बलियो बनाउन को लागी।
प्रकार र कोष्ठक को स्थापना
प्रकाशित 01.08.2021 01.08.2021
आधुनिक संसारमा, ब्रेसि teeth दाँत सही गर्न को लागी एक सामान्य तरीका हो। आउनुहोस् कि कसरी उनीहरुलाई उठाउन को लागी र orthodontist मा जानु अघि पुरा तरिकाले सशस्त्र हुन।
शरीर को लागी स्वस्थ उत्पादनहरु
हरेक दिन, पारिस्थितिकी बिग्रेको छ, तनाव र overwork, यो सबै उल्लेखनीय हाम्रो शरीर को उत्पादकता घटाउँछ। तपाइँ कसरी तपाइँको स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्नुहुन्छ? जीवनको गुणस्तर बढाएर ?! यो धेरै सरल छ, आउनुहोस् एक नजिकको नजर लिनुहोस्।
कसरी बच्चाहरु मा क्यान्सर को जोखिम कम गर्न - आमा बुबा को लागी 8 सुझाव
प्रकाशित 30.07.2021 30.07.2021
भविष्य मा तपाइँको बच्चा को एक पूर्ण जीवन को लागी, तपाइँ बचपन बाट आफ्नो स्वास्थ्य को बारे मा चिन्ता गर्न थाल्नु पर्छ। बढ्दै, उनीहरु पक्कै यो कदर हुनेछ!
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 959 अर्को पाना
54 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 1,562 प्रश्नहरू।